musha / Blog / Nei Yakakodzera Kicheni Faucet Inoita Musiyano
2020 / 11 / 09 kupatsanuraBlog 3131 0
Zvakaoma kuziva izvo zvauri kushaya kusvikira iwe watendeukira kune imwe yemamwe mapombi epamberi ekicheni. Kune akawanda marudzi, kubva pakubata kumisikidza kune inofamba sensor mapombi. Iwe unogona kuwana pombi mune zvakawanda zvakasarudzika dhizaini, uye iwe unogona kunyange kutora yekudhonza-pasi kana kudhonza-kunze sprayer mukufarira kune chimwe chinongedzo sprayer.
Iyo chaiyo pombi inogona kuita kuti maitiro ako asanyanya kuomarara uye iyo nguva yaunoshandisa yekicheni yako kuwedzera kunakidzwa. Kana iwe uchida yemhando yepamusoro pombi, iwe unofanirwa kugara uchiverenga zviyero pakutanga pane kutenga. Vatengi vanogona kunge vari vaviri vakaipa uye vakajeka kuvhurika nezve ruzivo rwavo nezvigadzirwa.
Kunyangwe iwe urikutenga mafuta-akakuya bronze kofi mapombi ayo anodhura mazana emadhora kana kungotsvaga imwe yakakodzera nzira, ongororo dzinogona kubatsira. Iyi ndiyo yakasarudzika nzira imwe yekudzikira pasi kurudyi pombi yako. Sezvo zvisiri zvachose munhu wese ari nyanzvi mumakompu ekicheni, ndicho chekutanga-chiyero chekubata dzinoverengeka zvezvinhu iwe zvaunoda kutsvaga. Verenga zvimwe ruzivo pano nezve izvi kana matte nhema dhonza pasi pombi yekicheni.
Iko kugona iwe kwaunoda kutsvaga kune yako nyowani kicheni pombi
Yakazara yendarira kuvaka
Izvi kazhinji hazvisi dambudziko kudzamara iwe wasarudza yechokwadi zvine mutengo-pombi pombi. Mazhinji mapombi anogadzirwa nendarira nekuda kwekuti iwo haachagadzirise simbi dzakasiyana pavanosangana nemvura. Izvi zvinoenderera nepombi yako kwenguva refu uye unowana imwe yekuwedzera mari yaunoshandisa. Mhando dzakadai seDelta, Moen, Kohler, Danze, uye zvakawanda zvekushandisa ndarira pamapipi ake.
Chizvarwa chazvino chinouya nemazhinji emapombi akasarudzika, asi makambani mashoma ari kusaririra kumashure kwe. Iwe unofanirwa kuona kuti iwe unowana iyo nguva inokushandira zvakanaka iwe. Kana iwe ukasarudza pane inofamba sensor pombi, iwe unogona kuiwana zviri nyore mukicheni yako. Nekudaro, sezvo izvi zvingave zvakanyanya-mutengo, iwe unofanirwa kuyeuka zvakare kubata tekinoroji sezvo yakafanana chaizvo uye inopa pakati pezvakaenzana mabhenefiti.
Chimwe chinhu iwe chaunoda kuona ndeye yakanaka vharuvhu tekinoroji. Mavheji ndiwo zvinhu zvinogona kuve zvakapfekedzwa mukompu yekicheni, uye maajenzi mashoma seDelta anopa tekinoroji inovimbisa kuti mavhavha ako ane hupenyu hweanopfuura mamirioni mashanu ekunyorera. Mazhinji matepi anoshandisa akati wandei emhando dzekeramiki mavharuvhu, uye zvakare iwe unongoda kuve nechokwadi chekuti yakagadzirirwa kwehupenyu hwakareba.
Guarantee uye garandi
Iyo yekupedzisira uye pombi inofanirwa kuvharwa negumbeze kuburikidza neyakavharirwa hupenyu hwese vimbiso, mune chero imwe nyaya ungatadza kuwana inoshamisa pombi. Chinhu chekuvhara chaunoda ndechekuchitsiva mugore kana maviri. Mabheti anofanirwa kuvhara seashoma makore mashanu, zvinoenderana nekuti unowanzovashungurudza sei, uye haufanire kutya kushandura pombi yako kwemakore mazhinji.
Maitiro ekurambidza yako sarudzo
Kana iwe ukatarisa pamhando dzakawanda dzepombi, unogona kutsvaga zvaunoda nemoyo wese uye nezvausingade. Ivo havazoiti vese kuita zvakaenzana uye hapachina ese matepi akavakwa zvakafanana. Mamwe marangi anotorwa mukufungidzirwa akakwirira kupfuura mamwe, uye kana iwe uchida izvo zvakanaka, iwe zvirinani uve unodisa kuita imwe mari nekuda kwekuti vanogona kunge vasina kudzikira.
Nekudaro, iko kuyananisa kwepombi ine mutengo wakakwira kunopa mabhenefiti akakura uye chigadzirwa chakanakisa. Iwe haufanire kunetseka pamusoro peiyi inodonha donhwe sezvo ekutanga-mwero mapombi anogadzirwa uchishandisa isiri-yekudonha tekinoroji. Chimwe chinhu chaunowana iwe uchibhadhara zvakati wandei pombi chaiyo ndiko kugona kwakawanda. Izvi zvinogona kusanganisira zvinhu zvakawanda zvakasiyana zvichienderana nepombi yaunosarudza.
Ita chivimbo iwe usanyanya kusarudza pombi inokatyamadza, asi zvakare imwe inoita kunge yakanakisa uye inoshanda nemazvo. Sezvo iwe usingakwanise kuyiyedza kutanga, unofanirwa kuona kuti yakanyatso sungwa kana iwe ukaita sarudzo inotyisa. Kana iwe ukafunda zvimwe zvinotsoropodza pakutanga, iwe haugone kuita sarudzo isiri iyo pane yako nyowani pombi yekicheni.
Pakapfuura :: Zvinhu Zvishanu Zvinoita Iyo Yakakura Kicheni Faucet Zvadaro: Maitiro ekutsiva mapombi ekicheni?
2020 / 11 / 09 1013
2020 / 11 / 02 1685
2020 / 11 / 02 1456
2020 / 11 / 01 1697
2020 / 10 / 31 1098